Dowladda Masar oo Seddex Maxjar ka Dhisaysa Soomaaliya – Radio Daljir
Luulyo 4, 2015 3:25 b 0
Sabti, Luuliyo 04, 2015 (Daljir) —Dowladaha Somalia iyo Masar ayaa kala saxiixday Borotokool lagu xoojinayo xiriirka labada dal iyo sidii dalka Masar bil kasta loogu dhoofin lahaa shan kun oo neef oo lo’ ah.
War Saxaafadeed ka soo baxay Wasiirka beeraha ee dalka Masar, Saalax Hilaal ayaa lagu sheegay inay isaga iyo dhigiisa Dowladda Federalka Somalia isku af garteen inay Dowladda Masar saddex Maxjaar oo lagu xannaaneeyo xoolaha loo dhoofinayo Masar ka dhisaan magaallooyinka Muqdisho, Bosaaso iyo Berbera.
Waxa kaloo uu Wasiirku sheegay inay soo diri doonaan Koox Dhakhaatiir ah oo gacan ka geysata baaritaannadda caafimaadka iyo tayada Lo’da loo dhoofinayo dalka Masar.
Wasiirku, waxa uu sheegay in Heshiiskaasi ay si rasmi ah ula saxiixdeen Dowladda Federalka Somalia, balse ma uusan sheegin Heshiiskaasi waqtiga uu ku ekaanayo.
Horey waxay Labada Dowladood u kala saxiixdeen Heshiiska Iskaashiga dhinaca Kalluumeysiga, iyadoo Kalluumeysatada Masar loo fasaxay inay ka jillaaban karaan Xeebaha Somalia.